Shinee အဖွဲ့ဝင် “Jonhyun” ဟာ စိတ်ဓာတ်တွေကျလွန်းလို့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သူ့ဘဝကို အရှုံးပေးပြီး လောကကြီးထဲက ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ထို ဖြစ်ရပ်ဟာ Kpop fan တွေ အတွက် ဖြေမဆည်စရာကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုကြီးပါ။ သူ့စျာပန နေ့မှာဆို Kpop idol တွေ အကုန်လုံး လာခဲ့ကြပြီး အားလုံးက ကြေကွဲနေခဲ့ကြပါတယ်။ သူ့နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေဆို ခုချိန်ထိ တမ်းတနေကြတုန်းပါ။
ဒါပေမဲ့ ခုတလော နာမည်ကြီးနေတဲ့ ‘Life Goes On” သီချင်းပိုင်ရှင် အမေရိကန်အဆိုတော် Oliver Tree ဟာ 2019 ခုနှစ်တုန်းက Jonghyun စျာပနပုံကို သူ့ပုံထည့် edit ပြီး သူ့ရဲ့ “Goodbye Farewell Tour” promote ဆင်းဖို့ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ Kpop fan တွေရဲ့ အလုံးအရင်းရှုံချမှုကြောင့် ထို post ကို ပြန်ဖျက်ခဲ့ပေမဲ့ သင့်တော်တဲ့ ဝန်ချတောင်းပန်မှုကို မလုပ်ခဲ့ပါဖူး။
သူကတော့ အသာလေးကျော်သွားပေမဲ့ ခုထိ မတောင်းပန်သေးတဲ့အပြင် နာမည်ကြီးကောင်းစားနေလို့ fan တွေက ပိုဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒိနေ့ October 11 ရက်နေ့မှာ ဘဲ k netizen တွေအားလုံး ထို ကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး online မှာ ခုလိုပြောဆိုနေကြပါတယ်။ “ခု ခေတ်စားနေတဲ့ Tik Tok သီချင်းဆိုတဲ့သူ လုပ်ထားတာမလား။
သူ့ post တွေပြန်ဖတ်တာနဲ့တင် ရွံတယ်” “တစုံတစ်ယောက်ရဲ့ စျာပနပုံကို သုံးပြီး ရီစရာလုပ်တဲ့ကောင်က ဘာကောင်လဲဟ ? သူ့မှာ အသိစိတ်ရောရှိရဲ့လား? ဒီပုံက သာမာန် ပုံမဟုတ်ဖူးလေ…” “သူများတွေရဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာကို သုံးပြီး ဘာလို့ သူ့ fan တွေကို ဖျော်ဖြေရတာလဲ?? ဒီပုံကို meme အဖြစ် မသုံးစေချင်ဖူး။
သွားလေသူ Jonghyun တမလွန်မှာ အေးအေးဆေးဆေး သွသူ အနားယူပါစေ” “ဒါက fan တွေကဘဲ ကဲကဲပို ထောက်ပြနေတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဖူးနော်။ ဒီနေရာမှာ ဘယ်သူပုံဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုမလုပ်သင့်ဖူးလို့ဆိုတာ လူဆိုရင် လူလိုနားလည်ကြမှာပါ”
“ဒီ ကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး tweet မှန်သမျှ သူ ဖျက်လိုက်ပြီထင်တယ်” “သူက တကယ်ကျင့်ဝတ်မသိတဲ့သူဘဲ… လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒီလိုလုပ်ရက်တယ်…မသင့်တော်ဖူးဆိုတာ သူနားမလည်ဖူးလား”
“ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တိုင်း သူတို့က ဒီလိုဖြစ်ဖို့ မရည်ရွယ်ပါဖူးဆိုပြီး ကျော်သွားတယ်.. ငါတို့ fan တွေကဘဲ over လုပ်နေတယ် လို့ ပြောကြတယ်… သူတပါးရဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာကို သုံးပြီး ကိုယ့် ကိုယ်ကျိုးအတွက်ဘဲ ကိုယ်ကြည့်တဲ့ လူတွေကို ငါတကယ် စိတ်ကုန်နေပါပြီ”
Next Yumi's Cells ထဲက Jinyoung ပုံကို Twitter မှာတင်ပြီး ​ဆေးထိုးလိုက်ပြန်တဲ့ BamBam »
Previous « တိုးတိတ်စွာလှူဒါန်းမှုတွေအကြောင်း သတင်းထွက်လာပြီးနောက် ချီးကျူးခံနေရသူ Lay